मानिसबाट जनावरमा फैलियो कोरोना : कोरोनाबाट ८ हजार ओत मरे ! – NamoBuddha Khabar
मानिसबाट जनावरमा फैलियो कोरोना : कोरोनाबाट ८ हजार ओत मरे !
सोमबार, आश्विन २६, २०७७ | १३:५४:१० |
कोरोना भाइरसको महामारी मानिसबाट अब जनावरमा फैलिन थालेको छ । अमेरिकी वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताले फार्ममा रहेका १० हजार ओत कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको जनाएका छन् । मानिसबाट जनावरमा कोरोना फैलिएको दावी अनुसन्धानकर्ताले गरेका सिएनएनले जनाएको छ ।
अमेरिकाको उटाहमा झण्डै ८ हजार ओत मरेका छन् । अर्को एक राज्यको फार्ममा २ हजार ओत मरेका छन् । नरम रौँका लागि ओतलाई व्यवसायिक पालन गरिन्छ । पशु विशेषज्ञ डा.डिन टेलरले भने, ‘ओतमा कोरोना भाइरस अगष्टमा पहिलो पटक देखिएको थियो । जुलाइमा फार्ममा काम गर्नेहरुमा कोरोना संक्रमण भएको थियो । उनीहरुबाटै सरेको अनुमान गरिएको छ ।’